Football Khabar » बार्सिलोनालाई अवे खेल जित्नै गाह्रो : २०औं स्थानको इस्पान्योलले रोक्यो !
बार्सिलोनालाई अवे खेल जित्नै गाह्रो : २०औं स्थानको इस्पान्योलले रोक्यो !
स्पेनिस ला लिगा फुटबलअन्तर्गत वर्ष २०२० को पहिलो खेलमा बार्सिलोना बराबरीमा रोकिएको छ । नेपाली समयअनुसार आइतबार बिहान भएको नयाँ वर्षको पहिलो तथा लिगको १९औं खेलमा बार्सिलोनालाई २०औं स्थानको इस्पान्योलले २–२ को बराबरीमा रोकिदिएको हो ।
पहिलो हाफमा पछि परे पनि दोस्रो हाफमा २ गोल गरेर खेलमा अग्रता लिएको बार्सिलोना अन्तिम केही मिनेट सम्हालिन नसक्दा महत्त्वपूर्ण २ अंक गुमाउन बाध्य भयो । बार्सिलोना खेलको ७५औं मिनेटमा १० खेलाडीमा झर्दाको फाइदा इस्पान्योलले उठायो ।
अवे मैदानमा बार्सिलोना खेलको ७५औं मिनेटमा १० खेलाडीमा झरेको थियो । मिडफिल्डर फ्रेन्की डे जोङ दोहोरो पहेंलोका साथ रातो कार्ड खाँदै मैदान छाडेपछि बार्सिलोनाले बाँकी समय १० खेलाडीमा खेलेको थियो । दोस्रो पहेंलो कार्डका लागि डे जोङले इस्पान्योलका खेलाडी बल लिएर अघि बढेका बेला कपडामा समातेर लडाएपछि रेफ्रीले उनलाई रातो कार्ड दिएका थिए ।
इस्पान्योलको घरेलु मैदानमा बार्सिलोनाले पहिलो हाफमा १–० ले पछि परेर दोस्रो हाफमा कमब्याक गरेको थियो । आफ्ना घरेलु दर्शकमाझ इस्पान्योलले खेलको २३औं मिनेटमा पाहुना टोली बार्सिलोनाविरुद्ध गोल गरेको थियो । मार्क रोकाले फ्रि किकमा हानेको बलमा डेभिड लोपेजले हेडिङमार्फत् सुन्दर गोल गरेका थिए । लोपेजेको फ्रि हेडरमा बार्सिलोनाका डिफेन्डर र गोलकिपरले बल रोक्न प्रयाससमेत गर्न भ्याएनन् ।
तर, दोस्रो हाफ सुरु हुनासाथ बार्सिलोना खेलमा फर्कियो । ५०औं मिनेटमा उरुग्वेन फरवार्ड लुइस स्वारेजले जोर्डी अल्बाको पासमा लो टचमा बललाई पोस्टको दिशा दिएपछि खेल १–१ भयो । प्रशिक्षक अर्नेस्र्टो भाल्भर्डेले दोस्रो हाफको सुरुआतमै इभान राकिटिकको स्थानमा अर्टुरो भिडाललाई मैदान छिराएपछि बार्सिलोनाले घरेलु टोलीविरुद्ध आक्रमण बढाएको थियो ।
सब्सिच्युट खेलाडी भिडालले दोस्रो हाफमा बार्सिलोनाका लागि लिड गोल गरे । खेलको ५९औं मिनेटमा उनले लुइस स्वारेजको असिस्टमा पोस्ट नजिकैबाट सुन्दर हेडिङ गोल गरेपछि खेलमा बार्सिलोनाले १–२ को अग्रता बनायो ।
तर, निर्धारित समयको अन्तिम १५ मिनेट बाँकी छँदा १० खेलाडीमा सीमित भएको पाहुना टोलीविरुद्ध इस्पान्योलले खेलको ८८औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्कायो । हारनजिक पुगेका बेला सब्सिच्युट चिनियाँ खेलाडी वाऊ लेईले शानदार गोल गरेपछि २०औं स्थानको घरेलु टोलीले सम्भावित हार मात्रै टारेन, लिग लिडरलाई २–२ को बराबरीमा रोक्दै १ अंक पनि जोड्न सफल भयो ।
अब यो बराबरीसँगै बार्सिलोनाले अंक तालिकामा रियल मड्रिडसँग अग्रता बढाउने मौका पनि गुमाएको छ । लिगका १९ खेलपछि दुवै टोलीको समान ४०–४० अंक छ । तर, गोलअन्तरमा बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ । यसअघि रियल मड्रिड आफ्नो खेलमा गेटाफेलाई ०–३ ले हराएर शीर्ष स्थानमा चढेको थियो । तर, इस्पान्योलसँगको खेलबाट १ अंक जोडेपछि बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा फर्किन सफल भयो ।
प्रकाशित मिति २० पुष २०७६, आईतवार ०३:३५